လက်ရှိကျေနပ်မှုအတွက်နောင်လာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်း။
(2015) ဝညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေး: လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်
comments: ဤစာတမ်း (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစိတ္တဇ) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြာရှည်စွာလေ့လာခြင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ လူတွေကဒေါ်လာဆယ်ဒေါ်လာရွေးတဲ့အခါနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုလျော့သွားတယ် အခုပဲ တစ်ပါတ်အတွက်ဒေါ်လာ 20 ထက်။ အနာဂတ်တွင်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောဆုကိုချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်မစွမ်းနိုင်ပါ။
နာမည်ကျော်၏စဉ်းစားပါ စတန်းဖို့ဒ် marshmallow စမ်းသပ်မှုဘယ်နေရာမှာ4နှင့်5တစ်နှစ်ကြားရှိသူတို့ကသုတေသီထွက်အရှိန်မြှနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့တဦးတည်း marshmallow အစာစားနောက်ကျလျှင်သုတေသီပြန်လာသောအခါ, သူတို့တစ်တွေသည်ဒုတိယ marshmallow နှင့်အတူဆုခခြံမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ဒီရယ်စရာ Watch ကလေးတွေ၏ဗီဒီယိုကို ဤရွေးချယ်မှုနှင့်အတူရုန်းကန်နေ။
အဆိုပါ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု (အလယ်အလတ်ဘာသာရပ်အသက် ၂၀) ဘာသာရပ်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုနှောင့်နှေးကျေနပ်မှုပေးသည့်အလုပ်တွင်ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။ ရလဒ်များ:
"သင်တန်းသားများကိုစားသုံးကြောင်းပိုမိုညစ်ညမ်း, သူတို့ကချက်ချင်းဆုလာဘ်ထက်လျော့နည်းအဖြစ်တန်ဖိုးရှိအနာဂတ်မှာဆုလာဘ်ကိုမွငျလြှငျပိုအနာဂတ်ဆုလာဘ်တွေကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတယ်။ ”
ရိုးရိုးလေးပိုကြီးတဲ့အနာဂတ်ဆုလာဘ်များအတွက်ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းဆက်နွယ်နေကြောင်းပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုထားပါ။ ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်သုတေသီများဘာသာရပ်များအကြာတွင်4ရက်သတ္တပတ်ဝနှင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနှောင့်နှေးအကဲဖြတ်။
ဆက်လက် porn အသုံးပြုမှုအတွက်ရလဒ် သာ. ကြီး4ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ဝနှောင့်နှေး။ ဤသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှဦးဆောင်ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထက်ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါပေမယ့်ဒုတိယလေ့လာမှုခေါင်းတလားထဲသို့လက်သည်းမောင်း။
A ဒုတိယလေ့လာမှု (ပျမ်းမျှအသက် 19) လျှင် porn အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် အကြောင်းတရားများ လျော့စျေး, ဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒပြည့်ဆိုင်းငံ့ထားရန်နိုင်ခြင်းနှောင့်နှေး။ သုတေသီများခှဲဝေ လက်ရှိ porn အသုံးပြုသူများသည် အုပ်စုနှစ်စုသို့:
တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စု3ပတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေကြားနေ,
တစ်ဦးကဒုတိယအုပ်စု3ရက်သတ္တပတ်အဘို့မိမိတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကနေကြားနေ။
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့သည်, သူတို့ကျပန်းသူတို့ရဲ့တာဝန်ပေးအပ်လှုပ်ရှားမှုမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သညျကိုပြောသည်ခဲ့ကြသည်။
ပါးနပ်သောအပိုင်းတစ်ခုမှာသုတေသီများသည်ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးအုပ်စုတွင်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကိုစားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁) ချုပ်တည်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သောဘာသာရပ်များအားလုံးနှင့် (၂) ဒုတိယအုပ်စု၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်သေချာစေသည်။
သုံးပတ်အပြီးတွင်သင်တန်းသားများသည်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့စျေးကိုအကဲဖြတ်ရန်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။ အရေးကြီးမှတ်ချက် -“ ညစ်ညမ်းသောအစာကိုရှောင်ခြင်းအုပ်စု” သည်“ အကြိုက်ဆုံးအစာရှောင်သူများ” ထက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသော်လည်းအများစုသည်ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ရလဒ်များ:
"ဟောကိန်းထုတ်သည်အတိုင်း, ညစ်ညမ်းလောင်ဖို့သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကျော် Self-ထိန်းချုပ်မှုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်တဲ့သူသင်တန်းသားများကို, အကြာတွင်ဆုလာဘ်ပိုကြီးတဲ့အဆင့်မြင့်ရာခိုင်နှုန်းကို ရွေးချယ်. အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်ချုပ်တည်းမှုရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆက်လက်စားသုံးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။
3 ပတ်ကြာကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုလျှော့ချသောအုပ်စုသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအစာကိုရှောင်ကြဉ်သည့်အုပ်စုထက်လျော့နည်းမှုနှေးကွေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအားဆန္ဒပြည့်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ လေ့လာမှုမှ
"ဒါကြောင့်လေ့လာမှု 1 ၏ longitudinal တွေ့ရှိချက်အပေါ်တည်ဆောက်ခြင်း, ကျနော်တို့ဆက်လက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှောင့်နှေးလျှော့တဲ့ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရန်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်ဒိုမိန်းအတွက် Self-ထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့်ခန်း (တဦးတည်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာစားသုံးခြင်းဥပမာ) အခြားကြိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ကိုကျော် Self-ထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းထက်နှောင့်နှေးလျှော့အပေါ်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
နှောင့်နှေးလျှော့ (gratification နှောင့်နှေးနိုင်စွမ်း) နှင့်ပတ်သက်။ ဤမျှအရေးကြီးသောကဘာလဲ? ကောင်းပြီ, နှောင့်နှေးလျှော့စျေးပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, အလွန်အကျွံလောင်းကစား, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အင်တာနက်စွဲနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်“ marshmallow စမ်းသပ်မှု” သို့ပြန်သွားသည်။ သုတေသီများကစိတ်ကျေနပ်မှုကိုနှောင့်နှေးရန်နှင့်ဒုတိယ marshmallow ရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်ကလေးများသည် SAT ရမှတ်များ၊ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုအဆင့်နိမ့်ခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊ ၎င်းတို့၏မိဘများကတင်ပြသည့်အတိုင်းပိုမိုကောင်းသောလူမှုရေးစွမ်းရည်များနှင့်အခြားဘဝအတိုင်းအတာများ (နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ) တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရမှတ်များရှိသည် ဒီမှာ, ဒီမှာနှင့် ဒီမှာ) ။ ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးနိုင်စွမ်းအသက်တာ၌အောင်မြင်မှုများအတွက်အရေးပါခဲ့ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုအသစ်ကအရာရာတိုင်းကိုခေါင်းထဲရောက်သွားစေတယ်။ marshmallow လေ့လာမှုများတစ်ခုမပြောင်းလဲဝိသေသအဖြစ်ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးနိုင်စွမ်းကိုညွှန်ပြနေစဉ်, ဒီလေ့လာမှုကဒီဂရီအချို့သောအတိုင်းအတာရဲ့အရည်, ပြသသည်။ အံ့အားသင့်စရာတွေ့ရှိချက်မှာ willpower ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိကအချက်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ဘာသာရပ်များ၏ဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ကြောင်းထိခိုက်စေခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမှ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သည်လူတစ် ဦး ၏လျှော့စျေးနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်းအပြုအမူနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်များ၏သဘောသဘာ ၀ သည်ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။
အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက် - ၁) ဘာသာရပ်များကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ကိစ္စရှောင်ကြဉ်ရန်မတောင်းဆိုခဲ့ပါ။ - ၂) ဘာသာရပ်များသည်မလိုက်နာသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းသူများမဟုတ်ပါ။ တွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက် porn သည်ထူးခြား။ အစွမ်းထက်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည် supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဘယ်သုတေသီများပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းသော်လည်းတစ်ဦးပင်ဝိသေသဖြစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမှ:
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုသည်မလိုက်နာသောသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုမရှိသော်ငြားလည်းအခြားသဘာဝဆုကျေးဇူးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာလျှော့စျေးလျှော့ချခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဒီသုတေသနကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယာယီနှိုးဆွမှုထက်ကျော်လွန်ကြောင်းပြသသည်။
As reboot ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထင်ရှားပါပြီအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူတစ် ဦး ၏လိင်မှုအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှု၏နိဂုံးမှ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စကိုချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်းလူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ၏အခြားကဏ္,များ၊ အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျော်လွှား။ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ တစ်မူထူးခြားသောဆုလာဘ်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု, Impulse နှင့်စွဲလေ့လာမှုများအဖြစ်ညစ်ညမ်းဆက်ဆံဖို့နှင့်တစ်ဦးချင်းအဖြစ် relational ကုသမှုအညီဒီလျှောက်ထားရန်ထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောကြောင့်။ "
လေ့လာမှုတွင် dopamine နှင့် cue- မောင်းနှင်သည့်အပြုအမူ၏အခန်းကဏ္ discussion နှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်သောဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလည်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရင်းများနှင့်အင်တာနက်အချက်များ (စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းဖြစ်ခြင်း) သည်အဘယ်ကြောင့်အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်ကိုများစွာသုတေသနပြုသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရလိင်လှုံ့ဆော်မှုကိုလျှော့ချရန်နှောင့်နှေးမှုကိုလျှော့ချခြင်း၏ရှင်သန်မှုအားသာချက်မှာနို့တိုက်သတ္တဝါများအားကောင်းကျိုးရရှိစေရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာသူတို့၏မျိုးရိုးဗီဇကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။
အဆိုပါသုတေသီများ porn စားသုံးမှု3အကြောင်းပြချက်များအတွက် Impulse တိုးမြှင့်မည်ဟုဟောကိန်းထုတ်:
သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်အလွန်အစွမ်းထက်ဖြစ်နိုင်ပြီး, အတိတ်သုတေသနအတွက် Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောပြီ
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, စစ်မှန်သောတွေ့ဆုံများအတွက်ရိုးရှင်းသောအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်လေ့ဖြစ်လာနိုင်ပြီး, လက်ငင်းဆန္ဒပြည့်ဖို့အခွအေနေအသုံးပြုသူနိုင်
အင်တာနက် constant အသစ်အဆန်းထပ်ခါတလဲလဲဆွနှင့်လေ့စေနိုင်သည် ( ပို. ဆွများအတွက်လိုအပ်ကားမောင်း, တုန့်ပြန်လျော့နည်းသွား)
အဆိုပါဘာသာရပ်များအများစုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆဲခဲ့ကြသည်အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, မြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့၏အကျဉ်းချုံးဆွေးနွေးချက်တခုရှိပါတယ် ထူးခြားသည့်အားနည်းချက် အင်တာနက် porn ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရန်။
“ လက်ရှိကောလိပ်ကျောင်းသားများ (အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိ) နှင့် ပတ်သက်၍၊ ဇီဝဗေဒအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်အသက် ၂၅ နှစ်အထိရှိကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ မြီးကောင်ပေါက်များသည်အခွင့်ထူးခံမှုနှင့်စားသုံးမှုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြောင်းပြသခြင်း၊ စွဲဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်။ "
J ကိုလိင် Res ။ 2015 သြဂုတ် 25: 1-12 ။
Negash S1, Sheppard NV, လမ်းဘတ်မိုင်, Fincham FD.
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းအားလက်လှမ်းမီလာစေရန်တိုးပွားစေခဲ့သည်။ နှောင့်နှေးလျှော့စျေးပိုမိုသေးငယ်ပို။ ချက်ချင်းဆု၏မျက်နှာသာအတွက်ပိုကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးထားပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောသဘာဝဆုလာဘ်များအနေဖြင့်လိင်လှုံ့ဆော်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်၏ထူးခြားသောလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ သို့မှသာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာသီအိုရီဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးခြင်းသည်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ချခြင်းနှုန်းနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မည်ဟုယူဆချက်ကိုလေ့လာမှုနှစ်ခုကစစ်ဆေးခဲ့သည်။
လေ့လာမှု 1 တစ် longitudinal ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလေးပတ်အကြာမှာပြန်အချိန် 1 မှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာများနှင့်တစ်ဦးနှောင့်နှေးလျှော့တာဝန်ပြီးဆုံး။ ပိုမိုမြင့်မားသောကနဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့သင်တန်းသားများကိုကနဦးနှောင့်နှေးလျှော့ဘို့ထိန်းချုပ်ရန်, အချိန်2မှာပိုမိုမြင့်မားနှောင့်နှေးလျှော့နှုန်းကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
လေ့လာမှု2တစ်ခုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုကျပန်းသုံးပတ်အဘို့မိမိတို့အနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဖြစ်စေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့တာဝန်ကျတယ်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေကြားနေတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုသူတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကနေကြားနေတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုထက်နိမ့်နှောင့်နှေးလျှော့သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကွဲပြားခြားနားသည်အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်ထက်ဝနှောင့်နှေးစေတယ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချသောဆုဖြစ်၏ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏သီအိုရီများနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုမီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။